သချိင်္ုင်းကုန်းမှ အပြုံးပိုင်ရှင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သချိင်္ုင်းကုန်းမှ အပြုံးပိုင်ရှင်
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Apr 28, 2015 in Creative Writing | 32 comments
တစ်ခုသော နွေအကုန်၊ မိုးအကူး ကာလတစ်ခုတွင် မိုးကြီး သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလျက် ရှိနေ၏။ လျှပ်စီးများ တဝင်းဝင်း၊ မိုးခြိမ်းသံများ တဂျုန်းဂျုန်းနှင့် ကြောက်မက်ဖွယ် ရွာသွန်းလျက် ရှိနေသည့် မိုးကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးသည်လည်း နေ့ခင်း ချိန်ခါပင် ဖြစ်လင့်ကစား မည်းမည်း မှောင်လျက်သာ ရှိနေချေ၏။
မိုးနှင့်အတူ လေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်လေ၏။ မိုးဒဏ်၊ လေဒဏ်အောက်တွင် သစ်ပင် များသည်လည်း ယိမ်းထိုးလျက် ရှိချေ၏။ ထိုသစ်ပင်များ ထဲတွင် နတ်ရွာ သင်္ချိုင်းကုန်းမှ မန်ကျည်းပင်ကြီး ၃ ပင်လည်း ပါဝင်လေသည်။
ထိုမန်ကျည်းပင်ကြီး ၃ ပင်သည် မိုးလေအောက်တွင် လှုပ်ခါ ရမ်းနေ၏။ အမှောင်ထု ကြီးစိုးထားသော ပတ်ဝန်းကျင် အောက်တွင် လျှပ်စီး တစ်ချက်တစ်ချက် လင်းလက်ခိုက်တွင် မကောင်းဆိုးဝါးကြီး ၃ ကောင် နိုးထလာသည် ကဲ့သို့ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းလှသေးတော့၏။
မန်ကျည်း ၃ ပင်၏ အလယ်တွင် ဇရပ်တစ်လုံး ရှိလေ၏။ ယင်းဇရပ်ကား နယ်နယ်ရရ ဇရပ် မဟုတ်။ အုတ်တိုက်၊ သွပ်မိုး ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့် ဇရပ်တစ်လုံး ဖြစ်၏။ တော်ရုံ မိုးဒဏ်၊ လေဒဏ်အား မတုန်မလှုပ် ခုခံနိုင်စွမ်း ရှိလေ၏။
ယင်းဇရပ်နှင့် ဘေးပတ်လည်မှ မန်ကျည်း ၃ ပင်အား သည်းရွာ ရွာသွန်းလျက် ရှိသော မိုးလေထဲ၌ လျှပ်စီး အလင်းဖြင့် မြင်တွေ့ရပုံမှာ – “လူအများ ဝိုင်းဝန်းကာ ညာသံပေး၍ ခြိမ်းခြောက်သော်လည်း မတုန်မလှုပ် ရပ်တည် နိုင်စွမ်းသော ကေသရာ ခြင်္သေ့ငယ်” ကဲ့သို့ အလားသဏ္ဍန် တူလှသေးတော့၏။
မိုးလေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အမှောင်ထု ကြားတွင် ကြောက်မက်ဖွယ် လှုပ်ခါ ရမ်းနေသော သင်္ချိုင်း မန်ကျည်းပင်ကြီး ၃ ပင်မှ မိုးလေနှင့် အတူ သံပြိုင်ဟစ်၍ ခြောက်လှန့် နေသော်လည်း ထိုဇရပ်ကား မတုန်မလှုပ် အေးဆေး တည်ငြိမ်နိုင်လွန်းလှ၏။
အဆိုပါ ဇရပ်၏ အေးဆေးခြင်းထက် ပို၍ အေးဆေးလွန်းသော လူသား တစ်ယောက်လည်း ရှိနေသေး၏။ ထိုလူသားကား ထိုဇရပ် အတွင်း အုတ်နံရံကို မှီလျက် မျက်လုံးလေးများအား မှေးစင်းထားကာ ဖက်ကြမ်း ဆေးပေါ့လိပ်ကြီး အား အရသာခံ၍ သောက်လျက် ရှိလေ၏။
“သြော် … မိုးသည်းတဲ့ အချိန်မှာ ဆေးလိပ် သောက်ရတဲ့ အရသာ ဟာ တယ်လည်း ကောင်းလှပါလားနော်”
ဟူသော အတွေးဖြင့် ထိုလူသားသည် ခပ်သဲ့သဲ့ ပြုံးလိုက်၏။
“ဒီဇရပ်မှာ လေကွယ် နံရံလေးတွေ ရှိနေလို့သာ တော်တော့တယ်။ နို့မဟုတ် လေတိုက်တိုက် ဖက်ကြမ်း ကိုက်ရတာ တယ် အရသာ ရှိလှမှာ မဟုတ်ဘူးရယ်”
ဟူ၍ မိမိ အဖြစ်ကို ကျေနပ်လျက် ထပ်မံ၍ မိန့်မိန့်ကြီး ပြုံးလိုက် ပြန်သေးတော့၏။
ထိုအပြုံးကား မိုးဒဏ်၊ လေဒဏ်၊ သင်္ချိုင်း မန်ကျည်းပင်ကြီး များ၏ ခြောက်လှန့် နေသံများအား ပြက်ရယ် ပြုဟန် တစ်ခုလည်း ဖြစ်၍ နေပေတော့ သတည်း ………။
မှတ်ချက် ။ ။ အထက်ပါ အကြောင်းအရာ အား တီဒုံ ရေးသားသော “သချိင်္ုင်းကုန်းမှ စိန်ခေါ်သံ” ခေါင်းစီး စာသားအား သဘောကျ နှစ်ခြိုက်သဖြင့် ရေးသား လိုက်ခြင်း ဖြစ်လေ၏။
လာပြီ လာပြီ ဒေါ်သက်ရီ….
စာဖတ်ပြီး သွားကျိုးနေတဲ့ ဖက်ကြမ်းဆေးလိပ်သောက်နေသူကို မြင်ယောင်လာတယ်။
ဘေးမှာ လုံမလေးတစ်ယောက်ပါရင် ပိုပြည့်စုံသွားမယ်နော်။
အန်တီမားမား … Right Answer ..
ဒီက ကောင်ကြီးပေါ့ ခညာ ….
ဒီကောင်ကြီး ဆိုတော့ … ဆက်ရန်လည်း ရှိတော့ဘူးပေါ့လို့ …
တီမမ ပြောသလို ဘေးမှာ .. အဲ့ဒီ မဒီလေး ကိုပါ ထည့်လိုက်ယင် ..
စပါရှယ် ပြီးပြည့်စုံသွားမယ့် ဇာတ်တစ်ပုဒ်ပေါ့ ခညာ …
စာမရေးတာ ကြာတော့ ဇာတ်ကွက် နည်းနည်း လိုတွားဒယ် … ဟီးဟီး
ဟိ.. ချိတော့ ချိပါဒယ်ကွယ်… ဒါမယ့်… အဲ့နေရာတော့ လိုက်ရဲဝူး.. နာ့ကို ထည့်မရေးနဲ့နော်..
ကဘာဆုံး ထိပဲ သွားသွား .. ဆို ..
ခုဒေါ့ … ဒီနိုင်ဂံထဲက ဒီနေရာလေး တွားဒါကိုများ … ဟွန့်
နာ မူးမူးနဲ့ ပြောမိတာဖစ်မယ်… ဟီဟိ
ပီးဘာဘီ မမဂျီး …
အဲ့ ဖက်ကြမ်း ကိုက်နေသူဟာ
ဟောဒီ အတုံး ပါဘဲ ခညာ ….
ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား
ဒီရယ်သံကြီး ကြားမိပါတယ် အောက်မေ့တာ ..
သင်္ချိုင်းကုန်း ထိပ်က တဲကလေး ဆီက ပေါ်ထွက်လာတာကိုး ခည ..
ဟေ့ ဆင်တူရိုးမှာ သတိပြုနော်။
ဒီတခါတော့ ဇာတ်လမ်းဆုံးအောင် ရေးပါ လို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆုံးအောင်မရေးပဲ တန်းလန်းထားရင် လိုချင်တဲ့ ဆုတောင်းမပေးတော့ဘူး။
ဒီမယ် .. ဒီမယ် ..
ရှေ့ကလေးတင် တူတာပါနော် …
ခရက်ဒစ်လည်း ပေးထားပါသေးဒယ်နော် … ဟွန့် ..
ဇာတ်လမ်းက ပီးဘီ .. ဆက်ရေးခိုင်းနဲ့ဒေါ့ …
သူဒို့လုပ်မှ လူလည်း တန်းလန်းတုံး ဖြစ်နေဘီ …
ချစ်တော့ဘဲ နေပလိုက်မှာ … ဟွန့် ..
သဂျီးတော့ နောက်တစ်သိန်း ဂွမ်းတော့မှာ မြင်ယောင်သေး .. ဟေဟေ့ .
ကိုးသင်ဂျိုင်း ဒွါးသိုင်းကျင့်ပီး ပြန်ထွက်လာတဲ့ ဆြာအံဇွာဒုံး
သင်ဂျိုင်းထဲမှာ တောက်ခေါက်သံ ဆက်ရွှေ့မယ်ပေါ့..။
ကိုးသင်ဂျိုင်း ဒွါးသိုင်း ကျင့်တာ မီဟုတ်ဘာဝူး ..
ကိုးသင်ဂျိုင်း ဖွာသိုင်း ကျင့်နေဒါ .. ဟီးဟီး
မိုးထဲ လေထဲ အဲ့ဒီနေရာ ဘာသွားလုပ်သတုံး
မိန့်မိန့်ကြီး ပြုံးလိုက် ပြန်သေးတော့၏။ တဲ့…
အမှန်ဂ နေ့ဂင်းဂျီးလေ တီအိရဲ့ …
နေ့ဂင်းဆိုတော့ ရွာထဲမှာ ပူဒယ်လေဂျာ ..
အဲ့ဒေါ့ အရိပ်အာဝါသ ကောင်းလွန်းလှဒဲ့ အဲ့မန်ကျည်းပင်တွေ အောက်က ဇရပ်ထဲ သွားနှပ်နေဒါပေါ့လို့ …
ပီးမှ သူ့ဟာသူ မိုးတွေ ရွာလာတာတော့ ပြောတတ်ဘူးပေါ့လို့ …
ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ် ဇာတ်လမ်းကြီး တစ်ပုဒ် ပါပဲ ဗျာ…။
ဟုတ်ဒယ် .. ဟုတ်ဒယ် ..
ဖြစ်ရပ်ဆန်း ဇာတ်လမ်းကြီး တစ်ပုဒ်ဘဲ ခည ..
ဒို့ ဥဘလက်ကြီးပဲ အမှန်ကို မြင်ဒတ်ဒယ် …
သူညားတွေများ ပြောလိုက်ချင်ဘူး .. ဟွန့် ..
အာ့နဲ့ ဘာဖစ်သွားသဒုံး နိဟာက တန်းလန်းဂျီးးး
အဲ့လို တန်းလန်းဟာ အဆန်းဆုံးဘဲ မမဝိုး ရဲ့ …
ဒါကို ဘောပေါက်သွားရင် မမဝိုး လည်း တန်းလန်း ဖြစ်လာလိမ့်မယ် … ဟီဟိ
အစကဖတ်နေတာ ဇာတ်လမ်းအကြီးကြီးပေါ့ ခုတော့ တို့နန့်နန့်နဲ့ပြီးသွားတယ်။ အံစာတုံးကို ခေါက်ချင်တယ်။
မပီးသေးတဲ့ ဇာတ်ထုပ်တွေက များလွန်းတော့
အရှည်ကြီး ဆက်ရန် လုပ်ချင်ဒေါ့ဘူး ..
ဒါဂျောင့်မို့ … ဒီဇာတ်မှာ ကိုယ်ဘဲ ဇာတ်လိုက်လုပ်ပီး အဆုံးသတ်ပလိုက်တာ .. ဟာဟ
ငါကတော့ ပြည့်တော့မယ် ..
နင်ကရော ဘယ်ဒေါ့လဲ ..
လူကလည်း အဲ့လို ဖြစ်နေဒါဘဲ …
ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်နဲ့ …
ဒါမယ့် .. အဲ့လို ဟိုမရောက် ဒီမရောက်က
ခုခေတ်ကြီးမှာ ဖိန့်တတ်ရင် တဂယ့် ဆြာကြီးဘဲဟ နော့ …
ပေါ့သေးသေးတော့ မှတ်နေနဲ့ …
တစ်သိန်းပြည့်တော့မယ့် အံစာတုံး ဒုန်း…ဒုန်း…
သိုင်းဝစ်ထုတွေ အခန်းဆက်နဲ့ ရေးပါ့လားဟ…
တစ်ပုဒ် ရေးပြပြီး ပြန်ပျောက်သွားဦးမယ် မကြံ နဲ့ ကိုယ်တော်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် Thanks ….
BTW “ယနေ့ပို့စ်” ရဲ့ သခင် ကို တော့ လွမ်းသား။ :-))
​ရှော်​တူနဲ့ အတူပျံလာဒါ ဖစ်​မယ်​ ။ ဟို က ​ဒေါက်​ရှာစိတ်​ဘွား
ဒီသူငယ်နဲ့ အရပ်ရှည်သလောက် ခြေလှမ်းကျယ်ကျယ်လှမ်းသကိုး။
ဘယ့်နယ့် သင်္ချိုင်းကုန်းထိ ဇာတ်လမ်းကလှမ်းရတယ်လို့ တကယ်ဆို အင်ယားကန်ဘောင်သွား အတူယှဉ်တွဲလို့ အကြော်လေးဘာလေးစား ဒီအချိန် ဒါမျိုးလုပ်ရမှာကို။